Nhau - Matipi ekushandisa uye kugadzirisa emabhodhoro emafuta akakosha
Pamusoro pekuzora mafuta akakosha pamaoko ako kana kubata muchina wemvura-okisijeni, Iyo vagadziri vemabhodhoro emafuta akakosha of Shanghai Rainbow Maindasitiri Co., ltd zvinoratidza kuti iwe unogona zvakare kuisa mafuta akakosha mu "yakakosha bhodhoro remafuta”Uye ugoenda nadzo. Unogona kunhuwidza kunhuwirira kwemafuta akakosha chero nguva kuti uzorodze iwe ~ musika wazvino Mafuta mazhinji akakosha anopa "magirazi akakosha emabhodhoro emafuta" uye "zvicherwa zvakakosha mabhodhoro emafuta", ayo anogona kushandiswa pamaketani, mhete, mhete, zvishongo, zvicherwa. zvishongo, zvishongo nezvimwe zvinhu. IyoRB PACKAGE inotevera tsananguro yemashandisirwo emabhodhoro emafuta akakosha uye maitiro ekuachengeta.
☆ Mashandisiro ekushandisa akakosha emabhodhoro emafuta
● Girazi yakakosha bhodhoro remafuta
Kutanga gadzirira mbiya yegirazi diki kana mudziyo mudiki unokwanisa kubata hushoma hwemafuta akakosha, donhedza mafuta akakosha mumudziyo mudiki zvinoenderana nechikamu, shandisa tsono yemafuta yakakosha kuti upedze kuburitsa, woizadza mugirazi bottle kupedzisa.
● Bhodhoro remafuta anokosha
Iyo yakakosha mafuta inogona kuzadzwa nenzira imwecheteyo segirazi yakakosha bhodhoro remafuta (rinotsanangurwa muchinhu chiri pamusoro), kana iyo yakakosha mafuta inogona kudonhedzwa zvakananga muhombodo pakona ye45 °. Chiyeuchidzo chakakosha: Mineral yakakosha oiri bhodhoro emakepi ese akanyatsogadziriswa. Kuti udzivise iyo kork kubva kutyora bhodhoro cap uye kukanganisa kusagadzikana kweiyo mbishi ore cap pamusoro, ndapota ita chokwadi chekuvhura nekuvhara nekutenderera.
☆ Kuchenesa yakakosha bhodhoro remafuta
Mhando dzese dzemabhodhoro emafuta akakosha anoda kucheneswa uye kucheneswa vhiki mbiri dzese. Kana iwe ukachinja mafuta akasiyana akakosha, iwe unodawo kuachenesa usati wawedzera mafomula akasiyana. Pakuchenesa, ndapota shandisa 75% doro uye dzivisa kushandisa mamwe ekuchenesa zvinhu.
Shandisa tsono kupinza doro mubhodhoro regirazi uye ndokuzunza zvinyoro nyoro, wozomwisa doro rakasviba wobva waridururira. Dzokorora chiito ichi kaviri kana katatu kuti upedze kuchenesa, uye unogona kuenderera nekuwedzera mafuta anokosha ekushandisa.
Paunenge uchichenesa, nyorova iyo yakakosha bhodhoro remafuta mu75% doro kwemaminitsi mashanu, wozoiburitsa woipukuta netauro repepa. Iko mukati mehombodo yakakosha yemafuta inogona kucheneswa nekadonhwe kadiki kana kupukuta musanganiswa wakasara. Mukuwedzera, usanyorove mabhodhoro emabhodhoro kweanopfuura masekondi makumi matatu kudzivirira kork kubva pakuzvimba nekukuvara kana kukanganisa kugadzikana kweichi chivharo chesimbi.
Ruzivo rwuri pamusoro rwakarongedzwa na Zvikamu Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd.